လောက၌ ကွိုတငျ၍ မသိနိုငျသောအရာ (၅)မြိုးရှိတယျ….ဘာတှလေဲ – Nyi Ma Lay
လောက၌ ကွိုတငျ၍ မသိနိုငျသောအရာ (၅)မြိုးရှိတယျ….ဘာတှလေဲ
By Nyi Ma LayPosted on October 11, 2021 October 11, 2021
လောက၌ကွိုတငျ၍ မသိနိုငျသောအရာ (၅)မြိုးရှိတယျ။ ဘာတှလေဲဆိုရငျ
(၁) ဇီဝိတံ – အသကျရှငျလကျြ ဘယျလောကျနရေဦးမယျဆိုတာ မသိဘူး။လောကကွီးမှာ ဘယျလောကျကွာကွာ အသကျရှငျနထေိုငျရဦးမလဲ ဆိုတာကို မသိနိုငျဘူးတဲ့။
(၂) ဗြာဓိ – ဘဝခရီးကို လြှကျေလှမျးရတဲ့အခါ မှာဘာရော ဂါနဲ့သမေယျဆိုတာကို လညျး မသိနိုငျပါဘူးတဲ့။
(၃) ကာလော – ကာလဆိုတာလူတဈယောကျဟာ ဘဝခရီးအဆုံးသတျ မယျ့အခြိနျဟာ ဘယျအခြိနျ လဲ? မနကျလား၊ နလေ့ညျလား၊ ညလားပွောလို့မရဘူးတဲ့ပွောလို့မ ရလို့လဲပဲ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ဘဝနိဂုံးခြု ပျသှားကွတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှေ အမြားကွီးရှိကွပါ တယျအမှတျတ မဲ့နရေ ငျတော့ မသိဘူးပေါ့အမှ တျနဲ့နမေယျဆိုရငျတော့ အကုနျသိေ နမှာပဲ မမြှျောလငျ့ဘဲနဲ့ ဖွဈနကွေတာေ တှခညျြးပါပဲ။
(၄) ဒဟေနိက်ခပေနံ – ကိုယျ့ရဲ့ရုပျအေ လာငျးကို ဘယျနရောမှာ သဂွိုလျမယျ၊ဘ ယျနရောမှာ မွှုပျနှံမယျဆို တာကိုလညျး မသိနိုငျဘူး တခြို့ဟာ ကောငျးကငျယံမှာ အနိစ်စရောကျသှား တာလညျး ရှိတယျ။ တခြို့ဟာ ပငျလယျထဲ ခရီးသှားရငျး အနိစ်စရောကျ သှားတာလညျး ရှိတယျ။ အမြိုးမြိုး ရှိကွတယျေ လအဲဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့အေ လာငျးကို ဘယျနရောမှာ မွှုပျနှံမယျ၊ ဘယျနရောမှာ သဂွိုလျမလဲ ဆိုတာကိုလညျး မသိနို ငျပါဘူးတဲ့။ နောကျမသိနိုငျ တာတဈခုက ဘာလဲဆိုရငျ
(၅) ဂတိ – လူတိုငျး လူတိုငျးဟာ ဘဝလမျးကွောငျးကွီး (၅)ခုရှိတယျ။ ဂတိငါးပါးလို့ ချေါတာပေါ့။ Destination ခရီးလမျးဆုံ ငါးဌာနရှိတယျ။ အဲဒီ ငါးဌာနက ဘာတှလေညျး ဆိုလို့ရှိရငျ
၁။ #နတျပွညျ – ကုသိုလျကံတှေ အကြိုးပေးလို့ ရောကျသှားနိုငျတဲ့ နတျပွညျပေါ့နျော။ နောကျတဈခုက
၂။ #လူ့ပွညျ – ပဲ။အကုသိုလျကံတှေ အကြိုးပေးလို့ ရောကျသှားနိုငျတာက
၅။ #ငရဲ အားလုံး ငါးမြိုးရှိတယျ။
အဲဒီတော့ ပုထုဇဉျတဈယောကျ အနနေဲ့ ဘဝနိဂုံး အဆုံးသတျ သှားပွီးတဲ့အခါမှာ ဘယျဘဝမှာ ပွနျလညျမှေးဖှားမလဲဆိုတာ ပွောလို့မရဘူး တဲ့။ သဆေုံးတဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အခွအေနတှေပေျေါမှာ မူတညျသှားတယျတဲ့
သောတာပနျမဖွဈသေးသမြှ ” နိယတဂတိ ” ကိုယျသတျမှတျထားတဲ့နရောတဈခုကို သွားလို့မရသေးဘူးတဲ့ #ဘုရားအလောငျးကွီးတောငျမှ တိရစ်ဆာနျဖွဈတဲ့အခါ ဖွဈတယျ။ ငရဲကတြဲ့အခါ ကြ သှားတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သခေါနီးအခြိနျမှာ ဘာတှနေဲ့ကွုံပွီး ဘာစိတျနဲ့သမေယျဆိုတာကိုပွောလို့ မရလို့ပေါ့နျော။ ဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးပွီဆိုရငျ လူတိုငျးဟာ ဒီအခကျြကို ကွိုတငျ မပွောနိုငျကွပါဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ဘဝဆညျးဆာ ရောကျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတိုငျး ပုဂ်ဂိုလျတိုငျးကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ အဲဒီအခြိနျမှာ အလှနျသနားစရာကောငျးပါတယျ။
သအေံ့မူးမူးအခြိနျရောကျနပွေီဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြကလညျး ကိုယျ့ကို ကယျတငျမပေးနိုငျတော့ဘူး။မွတျစှာဘုရားက ဟောထားတယျ ” န သနျတိ ပုတျတာ တာဏာယ ” တဲ့ “လောကမှာ သခွေငျးတရားနဲ့ ရငျဆိုငျရပွီ ဆိုရငျ အကာအကှယျပေးနိုငျတဲ့ သားသမီးဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ မိဘတှအေဖို့နျော” သားသမီးတှအေတှကျလညျးပဲ ကယျတငျပေးနိုငျတဲ့မိဘဆိုတာ မရှိဘူးနျော။
ဆှတှေမြေိုးတှထေဲမှာလညျး ဒီလိုဘဝဆညျးဆာအခြိနျ ရောကျနပွေီဆိုရငျတော့ ကယျတငျပေးနိုငျတဲ့သူ တဈယောကျမှမရှိဘူး ဒီလိုပွောတာ။
အဂ်ဂမဟာပဏ်ဍိတ ဒေါကျတာအရှငျနန်ဒမာလာဘိဝံသ( ပါမောက်ခခြုပျဆရာတျောဘုရားကွီး )
လောက၌ကြိုတင်၍ မသိနိုင်သောအရာ (၅)မျိုးရှိတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုရင်
(၁) ဇီဝိတံ – အသက်ရှင်လျက် ဘယ်လောက်နေရဦးမယ်ဆိုတာ မသိဘူး။လောကကြီးမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရဦးမလဲ ဆိုတာကို မသိနိုင်ဘူးတဲ့။
(၂) ဗျာဓိ – ဘဝခရီးကို လျှေက်လှမ်းရတဲ့အခါ မှာဘာရော ဂါနဲ့သေမယ်ဆိုတာကို လည်း မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။
(၃) ကာလော – ကာလဆိုတာလူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝခရီးအဆုံးသတ် မယ့်အချိန်ဟာ ဘယ်အချိန် လဲ? မနက်လား၊ နေ့လည်လား၊ ညလားပြောလို့ မရဘူးတဲ့ပြောလို့မ ရလို့လဲပဲ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘဝနိဂုံးချု ပ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီးရှိကြပါ တယ်အမှတ်တ မဲ့နေရ င်တော့ မသိဘူးပေါ့အမှ တ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်သိေ နမှာပဲ မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာေ တွချည်းပါပဲ။
(၄) ဒေဟနိက္ခေပနံ – ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အေ လာင်းကို ဘယ်နေရာမှာ သဂြိုလ်မယ်၊ဘ ယ်နေရာမှာ မြှုပ်နှံမယ်ဆို တာကိုလည်း မသိနိုင်ဘူး တချို့ဟာ ကောင်းကင်ယံမှာ အနိစ္စရောက်သွား တာလည်း ရှိတယ်။ တချို့ဟာ ပင်လယ်ထဲ ခရီးသွားရင်း အနိစ္စရောက် သွားတာလည်း ရှိတယ်။ အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်ေ လအဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အေ လာင်းကို ဘယ်နေရာမှာ မြှုပ်နှံမယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ သဂြိုလ်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း မသိနို င်ပါဘူးတဲ့။ နောက်မသိနိုင် တာတစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင်
(၅) ဂတိ – လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ဘဝလမ်းကြောင်းကြီး (၅)ခုရှိတယ်။ ဂတိငါးပါးလို့ ခေါ်တာပေါ့။ Destination ခရီးလမ်းဆုံ ငါးဌာနရှိတယ်။ အဲဒီ ငါးဌာနက ဘာတွေလည်း ဆိုလို့ရှိရင်
၁။ #နတ်ပြည် – ကုသိုလ်ကံတွေ အကျိုးပေးလို့ ရောက်သွားနိုင်တဲ့ နတ်ပြည်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက
၂။ #လူ့ပြည် – ပဲ။အကုသိုလ်ကံတွေ အကျိုးပေးလို့ ရောက်သွားနိုင်တာက
၅။ #ငရဲ အားလုံး ငါးမျိုးရှိတယ်။
အဲဒီတော့ ပုထုဇဉ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘဝနိဂုံး အဆုံးသတ် သွားပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်ဘဝမှာ ပြန်လည်မွေးဖွားမလဲဆိုတာ ပြောလို့မရဘူး တဲ့။ သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ မူတည်သွားတယ်တဲ့
သောတာပန်မဖြစ်သေးသမျှ ” နိယတဂတိ ” ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကို သြားလို့မရေသးဘူးတဲ့ #ဘုရားအလောင်းကြီးတောင်မှ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါ ဖြစ်တယ်။ ငရဲကျတဲ့အခါ ကျ သွားတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သေခါနီးအချိန်မှာ ဘာတွေနဲ့ကြုံပြီး ဘာစိတ်နဲ့သေမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ မရလို့ပေါ့နော်။ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းပြီဆိုရင် လူတိုင်းဟာ ဒီအချက်ကို ကြိုတင် မပြောနိုင်ကြပါဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ဘဝဆည်းဆာ ရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်မှာ အလွန်သနားစရာကောင်းပါတယ်။
သေအံ့မူးမူးအချိန်ရောက်နေပြီဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်ကို ကယ်တင်မပေးနိုင်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားတယ် ” န သန်တိ ပုတ်တာ တာဏာယ ” တဲ့ “လောကမှာ သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီ ဆိုရင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သားသမီးဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ မိဘတွေအဖို့နော်” သားသမီးတွေအတွက်လည်းပဲ ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘဆိုတာ မရှိဘူးနော်။
ဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာလည်း ဒီလိုဘဝဆည်းဆာအချိန် ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး ဒီလိုပြောတာ။
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ( ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး )
Previous post ကားအရောငျတှေ ထဲမှာ ဘယျအရောငျတှကေ မတျောတဆအဖွဈမြားပီး အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတဲ့ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမြားသလဲ…သငျ သိပါသလား
Next post Online Class တကျမယျ့ ကလေးငယျမြားကို အုပျထိနျးသူမြားက ပံ့ပိုးပေးသငျ့သညျ့ နညျးလမျးမြား